OZI NDỊ AZỤ: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 15 July 2020	• 2 Comments
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 14 July 2020	• 11 Comments
Kedu ihe kpatara eji egbu agba agụba maka ihu igwe (Covid-19) ga-emikpu n'ime imi? Ezigbo oke nke na ndị mmadụ ka na-ata ahụhụ na ya mgbe ụbọchị gasịrị. N'oge a, onye ọ bụla nwere ọnụ imi ya n'anya n'ihi na nje nwere ike ịnwe ume ma ọ bụ ụkwara? Yabụ na nke ahụ ezighi ezi. Ọ bụrụ na coronavirus na-efe efe, […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 July 2020	• 9 Comments
Ọ bụ ihe dị ịtụnanya ịhụ ka ndị na - agụ Martin Vrijland, ndị gbalịsiri ike ruo afọ asaa na ọkara maka ịkpọte maka steeti ndị uwe ojii na - emepe emepe, na - agbagoghachi na atụmatụ ọhụụ mara mma dịka 'Café Weltschmerz' na 'Agha furu efu' nke Sven Hulleman. Karel van Wolferen, onye a ma ama na ọwa ndị ahụ, leghaara […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 9 July 2020	• 18 Comments
Na mbipụta gara aga nke edemede a, akọwaara m etu mkparịta ụka aerosols dị, mmiri buru ibu na ebe dị otu mita na ọkara ka ọ bụ mkparịta ụka nke Maurice de Hond na Willem Engel nyere, n'ihi na ha na-ezere ajụjụ bụ isi, ya bụ: “ Gịnị bụ nje, olee otu nje na-arụ ọrụ na olee otú […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 8 July 2020	• 10 Comments
Oge ụfọdụ ọ dị ka ànyị na-ahụ ihe omume amụma, dị ka n'ụdị nke ahịhịa na-agafe agafe ugbu a na-eri nnukwu ubi nri dị ukwuu na kọntinent atọ. Coronavirus ahụ nwere mmetụta dị ukwuu na akụ na ụba n'ụwa niile, nke akọwaworo n'ọtụtụ ebe ebe a dịka ọ na-egosi na coronavirus bụ nanị alibi ka […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 6 July 2020	• 0 Comments
Maka ndị ka chere na Black Black Life Matter nwere ntụgharị oge nwa oge n'ihi ogbugbu George Floyd na ọgba aghara zuru ụwa ọnụ nke kpatara ya, ọ dị mma ka ị lelee onyonyo ndị dị n'okpuru. Nke ahụ bụ n'ụbọchị endbọchị Mwere Onwe, July nke 4. Ka nke a, nwa nwanyị dị afọ asatọ nwere ojii […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 2 July 2020	• 6 Comments
Ọ bụrụ na anyị elele akụkọ mba ụwa, ọ dị ka ọ dị n'ezie na agba nke coronavirus na-aga. Ma nke ahụ ọ bụ n'ezie ihe na - efegharị nke coronavirus ma ọ bụ na - efegharị nke ọnụ ọgụgụ na Hollywood ụdị mgbasa ozi nke Hollywood nke ICs zuru oke ka bụ ajụjụ. Ajụjụ ahụ banyere coronavirus covidna-19 na-agbasa […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 30 June 2020	• 5 Comments
N'oge na-adịbeghị anya, m na-agbasi mbọ ike na akwụkwọ ọhụrụ akpọrọ 'Coronavirus covid-19 kedu ebe njedebe a?' Ọrịa coronavirus covid-19 ahụ bụ ọrịa na-ebu amụma nke mezuru, dịkwa ka ntinye nke ngwa ọrụ teknụzụ ahụ m tụrụ anya ya. Akwụkwọ a kọwara n'ụzọ zuru ezu nke edemede edemede etinyere na etu m si eme nke a […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 29 June 2020	• 1 Comment
Ulo elu Penrose bu ihe di nma ma obu ihe na - apughi ime eme nke onye okacha amara nke Britain na ndi dibia ihe omuma Roger Penrose mere na 1958. N'elu steepụ, ọ dị ka ọ ga - ekwe omume ịzọli ụkwụ (ma ọ bụ ala) gbagote na otu steepụ ahụ. Na […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 June 2020	• 20 Comments
"Lovehụnanya, ndidi na ntụkwasị obi". Adị m afọ 10 mgbe m ji ọhụụ hụ Nzukọ-nsọ ​​ma ghọta na a ga-ahụ gị n’anya ma ọ bụrụ na ị chigharịkwuru Onye-nwe. Mgbe m kpebiri na m agaghị ahụ, ịhụnanya gbanwere ozugbo ntaramahụhụ. Otu slime m […]
Nleta ha: 4.321.912
guppy op Ajuju ParaVisie Magazine na Martin Vrijland banyere akwukwo ya